कुरा मात्रै ठूला गरेर हुने के ? « Jana Aastha News Online
प्रकाशित मिति : २२ माघ २०७३, शनिबार ०५:४०
डा. भीम आचार्यको नाम काटेर डा. राजेन्द्र पन्तलाई स्वास्थ्य सेवा विभागको निमित्त महानिर्देशक बनाइएको छ । तत्कालीन स्वास्थ्यमन्त्री रामजनम चौधरीलाई खुशी पारेर बाल स्वास्थ्य महाशाखा छिरेका पन्तले यो पटक रामै्र मिहिनेत गरेको स्रोत बताउँछ । कुरा नमिल्दा बालस्वास्थ्य महाशाखा र व्यवस्थापन महाशाखामा क्रमशः डा. विकास लामिछाने र डा. विकास देवकोटाको नाम उठे पनि हालसम्म सदर भएको छैन ।
थापाले जति नाराबाजी गरे पनि अस्पताल र स्वास्थ्य संस्था ५ बजेसम्म सञ्चालन हुन सकेका छैनन् । खगराज अधिकारीको पालामा बनेको विस्तारित अस्पताल सेवा निर्देशिकालाई तोडमोड गरी बनाइएको स्वास्थ्यकर्मी सेवा निर्देशिका कार्यान्वयन हुनसक्ने अवस्था छैन । त्यतिबेला कडा विरोध गर्ने डा. केदार र डा. मुक्ति यो पटक चुप छन् । डा. मुक्ति मेथिनकोट काभ्रे दरबन्दी राखेर बिपी स्मृति अस्पताल र कलेजमा पढाउने काम गरिरहेका छन् । मन्त्रालयमा भोगेन्द्र डोटेल र भोलारामको शासनले अरू कर्मचारी रुष्ट छन् । भोलारामले श्रीमतीलाई नर्सको समस्या समाधान कार्यदलको अध्यक्ष बनाएपछि व्यापक विरोध भएको छ । भोगेन्द्र कार्यविधि नाघेर धेरै पटक विदेश गएका छन् ।
दोहोरो शासनबाट वाक्क भएर कांगे्रस विचारका सहसचिव दुवै जनाले सरुवा मागेका छन् । केही गरौं भन्ने विचारका सचिव डा. सेनेन्द उपे्रती शैलेश सिटौला र प्रताप पौडेलको व्यवहारबाट आजित छन् । केन्द्रले किन्नुपर्ने ५३ वटा औषधिमध्ये २५ आइटमसम्म पनि खरिद हुने सम्भावना छैन । लोक सेवाले माग्नुपर्ने पद सबै करारमा मागेर उठाउने खेल शुरु भएको छ । १० प्रतिशत निजी क्षेत्रको संस्थाबाट निःशुल्क पाउने हल्लामै सीमित भयो । वायु सेवा सञ्चालकले १० प्रतिशत निःशुल्क दिने भए हामी तयार छौं भनेपछि हाल गगन चुप छन् । निजी संस्था अनुगमन र दर्ताको नाममा क्षेत्रीय निर्देशनालय र जिल्ला जनस्वास्थ्य कमाइ हुने क्षेत्र भएका छन् । गगन थापाले धरान, पाटन, पोखरा र जुम्लामा उपकुलपति नियुक्त गर्न सकेका छैनन् ।